GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Jehova na-enyocha ihe mmadụ bu n’obi (2)
Tinye ihe ọ bụla ị na-eme n’aka Jehova (3)
Ọ bụ Jehova nwe ihe zuru ezu e ji atụ̀ ihe (11)
Nganga na-ala mmadụ n’iyi (18)
Isi awọ́ bụ okpueze mara mma (31)
16 Mmadụ na-ahazi ihe dị ya n’obi ọ ga-ekwu,Ma ọ bụ Jehova na-eme ka ọ mara ihe* ọ ga-aza.+ 2 Ihe niile mmadụ na-eme na-adị mma n’anya ya,*+Ma Jehova na-enyocha ihe mmadụ bu n’obi.+ 3 Tinye ihe ọ bụla ị na-eme n’aka Jehova,+Ihe ndị ị chọrọ ime ga-agakwa nke ọma. 4 Jehova na-eme ka ihe niile mezuo nzube ya,Ka e wee bibie ndị ajọ omume n’ụbọchị ọdachi ga-adakwasị ha.+ 5 Jehova kpọrọ onye ọ bụla dị mpako asị.+ Ka obi sie gị ike na a ga-atarịrị ya ahụhụ. 6 Ịhụnanya na eziokwu na-eme ka a gbaghara mmehie,+Ịtụ egwu Jehova na-emekwa ka mmadụ kwụsị ime ihe ọjọọ.+ 7 Ọ bụrụ na ihe mmadụ na-eme dị Jehova mma,Ọ na-emedị ka onye ahụ na ndị iro ya dịrị námma.+ 8 Ọ ka mma mmadụ inwe obere ihe ma bụrụ onye ezi omume+Kama mmadụ ịkpataju akụ̀ ma ya abụrụ na ọ naghị akwụwa aka ọtọ.+ 9 Mmadụ nwere ike ichepụta ihe ọ ga-eme,Ma ọ bụ Jehova na-eduzi nzọụkwụ ya.+ 10 Eze kwesịrị ịna-ekwu ihe Chineke kpebiri.+ O kwesịghị ikpe ikpe na-ezighị ezi.+ 11 Ọ bụ Jehova nwe ihe dị iche iche zuru ezu e ji atụ̀ ihe. Ọ bụ ya mere ka e nwee ihe niile e ji atụ̀ otú ihe dịruru arọ.+ 12 Ndị eze kpọrọ ajọ omume asị,+N’ihi na ọ bụ ezi omume na-eme ka ọchịchị* kwụsie ike.+ 13 Obi na-atọ ndị eze ụtọ ma mmadụ kwuo ihe dị mma. Ha hụrụ onye na-ekwu eziokwu n’anya.+ 14 Iwe eze nwere ike ime ka e gbuo mmadụ,+Ma onye ma ihe na-eme ka iwe eze dajụọ.*+ 15 Onye eze lere anya ọma ga-adị ndụ. Amara ya dị ka mmiri na-ezo n’ụla mmiri.+ 16 Ọ kacha mma ka mmadụ nweta amamihe kama inweta ọlaedo.+ Ọ ka mma ka mmadụ họrọ ịghọta ihe kama ịhọrọ ọlaọcha.+ 17 Ndị ezi omume anaghị etinye aka n’ihe ọjọọ. Onye ọ bụla nke na-echebara otú o si ebi ndụ echiche na-echebe ndụ* ya.+ 18 Nganga na-ala mmadụ n’iyi,Mpako na-emekwa ka mmadụ daa.+ 19 Ọ ka mma na mmadụ wedara onwe ya ala soro ndị dị umeala n’obi nọrọ+Kama mmadụ iso ndị mpako kee ihe ha kwatara. 20 Ihe ga-agaziri mmadụ ma ọ bụrụ na e nwee okwu pụtaranụ, ya akpaa àgwà gosiri na ọ na-aghọta ihe,Onye tụkwasịrị Jehova obi na-enwekwa obi ụtọ. 21 A ga-ewere onye ma ihe ka onye na-aghọta ihe.+ Onye na-ekwu okwu ọma na-ekwu ihe* na-eru mmadụ n’obi.+ 22 Ịghọta ihe na-eme ka mmadụ dị ndụ,Ma ahụhụ ndị nzuzu na-ata bụ na ha ga na-ezuzu nzuzu. 23 Onye ma ihe na-echebara ihe ọ na-ekwu echiche nke ọma,+Ọ na-ekwukwa okwu otú ga-eru mmadụ n’obi. 24 Okwu ọma dị ka ezigbo mmanụ aṅụ. Ọ na-atọ ụtọ, na-agwọkwa mmadụ.*+ 25 E nwere ihe na-adị mma n’anya mmadụ,Ma ọ na-emecha butere mmadụ ọnwụ.+ 26 Agụụ nke na-agụ* onye ọrụ na-eme ka ọ rụrụ ọrụ na-aga,N’ihi na ọ na-arụsi ọrụ ike ka o nweta ihe ọ ga-eri.+ 27 Onye nzuzu na-akpa nkata ọjọọ.+ Okwu ya na-erekwa ka ọkụ nke na-enwusi ike.+ 28 Onye okwu na ụka* na-akpata esemokwu,+Onye asịrị na-ekewakwa ndị bụ́ ezigbo enyi.+ 29 Onye tigbuo zọgbuo na-arata onye agbata obi ya Ma duba ya n’ụzọ ọjọọ. 30 Ọ na-atabi anya ya mgbe ọ na-akpa nkata ọjọọ. Ọ na-atagide egbugbere ọnụ ya ezé ma ọ rụwa arụrụala o chepụtara. 31 Isi awọ́ bụ okpueze mara mma*+Ma ọ bụrụ na onye nwere ya na-ebi ndụ dị mma.+ 32 Onye na-anaghị ewe iwe ọsọ ọsọ+ ka dike mma,Onye na-ejide onwe ya ma iwe wewe ya kakwa onye meriri obodo mma.+ 33 Mmadụ na-efe nza,*+Ma ọ bụ Jehova na-ekpebi ihe niile a na-efeta na nza.+
^ Ma ọ bụ “ihe kwesịrị ekwesị.”
^ Ya bụ, n’anya mmadụ.
^ Ma ọ bụ “ocheeze.”
^ Ma ọ bụ “na-ezere iwe eze.”
^ Ma ọ bụ “Okwu dị ụtọ.”
^ Na Hibru, “na-agwọkwa ọkpụkpụ.”
^ Ma ọ bụ “Onye na-akpa nkata ọjọọ.”
^ Ma ọ bụ “dị ebube.”
^ Na Hibru, “Ọ bụ n’apata ụkwụ ka a na-efe nza.”